अभिनेत्री मेघान मार्केल र सासु–आमा अर्थात् महारानी एलिजाबेथको बिचमा भयो यस्तो लफडा – rastriyakhabar.com
अभिनेत्री मेघान मार्केल र सासु–आमा अर्थात् महारानी एलिजाबेथको बिचमा भयो यस्तो लफडा
काठमाडौँ। प्रिन्स हयारीसँग विवाह गरेयता अभिनेत्री मेघान मार्केल समाचारको शीर्षक बनिरहेकी छन् । यस पटक उनको विवशतालाई लिएर खबर छापिएको छ । कुरा के भएछ भने, उनी तरकारीमा लसुन हालेको मन पराउने, लसुनका परिकार स्वाद मानीमानी खादिँरहिछन् । तर, उनकी बूढीसासु–आमा अर्थात् महारानी एलिजाबेथ लसुन भनेपछि दुरदुर भाग्ने !
बकिङघम दरबारमा मात्र नभएर एलिजाबेथ पुग्ने जुनसुकै समारोहमा लसुनरहित परिकार बनाउनुपर्ने रहेछ । उनले दरबारका खानामा लसुन पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको थाहा पाएपछि मार्केल खिन्न भएकी छन् । उनी आफ्नो प्रिय स्वाद भुल्न विवश भएकी छन् । ‘हामीले कहिले पनि लसुनप्याज हालेका परिकार पस्किन पाउँदैनौं,’ शाही सेफ डयारेन म्याकग्रेडीले भनेका छन्, ‘महारानीलाई मेनुमा लसुन राखेको मन पर्दैन ।’
मार्केललाई लसुन छोड्न कति गाह्रो होला भन्ने कुरा विवाहअघिका उनका अन्तरवार्ता हेर्दारपढ्दा थाहा पाइन्छ । तिनमा उनले आफ्ना प्रिय खानेकुराको सूचीमा लसुनैलसुनका परिकार उल्लेख गरेकी थिइन् । फिलिपिनो चिकेन एडोबो आफूलाई खुब मीठो लाग्ने उनले बताएकी थिइन् । यो परिकार लसुनका पोटी राखेर बनाइन्छ ।
दरबारमा लसुन परहेज गरिएकाले हयारी र मार्केल छुट्टै घरमा बसेको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ । चिकेन रेसिपीमा मुख मिठयाउने मार्केलको चञ्चलेपनामा भुलिएका हयारीले उनका लागि लसुनसहितका परिकारको बन्दोबस्त गरेकै हुनुपर्ने बेलायती समाचार माध्यमको अड्कल छ । श्रोत कान्तिपुर
आइतवार, साउन १३, २०७५ मा प्रकाशित
खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? यस्ता ५ असर होला
चुम्बन गर्नुहुन्छ ? सावधान !
रायो किन खाने ? यस्ता छन अचम्मका फाइदा
भद्दा छालालाई १० मिनेटमा चम्किलो बनाउन सकिने तीन प्राकृतिक उपायहरु
नुवाकोटमा मिनी ट्रक दुर्घटनामा १८ को मृत्यु, १६ घाइते
गच्छदारलाई किशोर गुरुङ सहित २०० महासमिति सदस्य
कांग्रेसमा पदाधिकारीबारे सहमति जुटेन
महासमिति सदस्य भन्छन्-‘नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ देख्दा लज्जाबोध हुन्छ’
कांग्रेसको महासमिति बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा